Qaramada Midoobey oo war ka soo saartay Dabelo ku dhuftay Waqooyiga Soomaaliya. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On May 20, 2018
Hornafrik-Qaramadda Midoobay ayaa shegtay in Roobabkii iyo dableylahii is watay ee ku dhuftay deegaannada waqooyiga Soomaaliya ay sababeen burburka guryo badan ,iyadoona ay ku dhinteen ku dhawaad 2,000 oo xoolo ah.
Qaramad Midoobey ayaa sheegtay in roobabkan culus la filayo in ay ka sii socdaan xeebaha Somaliland iyo sidoo kale Puntland.
“Hay’adaha Bani’aadamnimada ayaa si dhow ula soconaya xaaladda wax-yeelada duufaanta ka soo gaartay dadka ku nool Puntland iyo Somaliland,” ayaa lagu sheegay war ka soo baxay hay’adda gargaarka ee Qaramada Midoobay.
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in Puntland, roobculus uu ka da’ay , waxaana ka mid ah meelaha ugu daran Bareeda, Caluula, Murcanyo, Gumbax.
“Qiyaastii 35 guri,15 doomood oo yaryar ayaa ku burburay, waxaa sidoo kale ku dhintay 1,260 xoolo ah degmada Las-qoray” sidda ay sheegtay Hay’adda.
Puntland ayaa sheegtayy si loo fududeeyo iska warqabka dadka iyo maamulka la bilaabay in la adeegsado talleefoonnada gacanta oo dadka loogu dirayo fariimo la xiriira in ay ka fogaadaan dhulka godan iyo togagga ay biyuhu maraan si loo soo yareeyo khasaaraha nafeed ee ka dhalan kara duufaantan iyo roobabka wada socda.
Askari shalay Jowhar ku dilay qof shacabka ah oo la qabtay.